Daadad ka dhacay Jarmalka: waxyeelo, musiibo iyo isbedelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 19/07/2021 09:38 | Dhacdooyinka saadaasha hawada, Daadadka
ka daadadka Jarmalka warkii oo dhan ayey maanta buux dhaafiyeen. Mana ahan wax ka yar musiibada ka dhacda dalkan. Ugu yaraan 120 qof ayaa dhimatay boqolaal kalena Galbeedka Yurub ayaa la la'yahay ka dib markii qaar ka mid ah daadadkii ugu xumaa tobanaan sano. Roobab diimeed ayaa sababay fatahaada wabiyada, oo halakeeyay gobolka.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan wararka ku saabsan daadadka Jarmalka iyo khataraha aan la kulanno isbeddelka cimilada.
1 Daadadka Jarmalka
2 Isbedelka Cimilada iyo daadadka ka dhaca Jarmalka
3 Roobab xoogan
4 Ma laga fogaan karaa?
Jarmalka gudaheeda, halkaasoo tirada dhimashadu hadda ka badan tahay 100, Angela Merkel waxay ku baaqday dagaal adag oo ka dhan ah isbeddelka cimilada. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay Belgium. Nederland, Luxembourg iyo Switzerland sidoo kale waa ay saameeyeen. Waxyaabo badan ayaa ka qayb qaata daadadka, laakiin jawiga diirran ee ay sababtay isbeddelka cimilada ayaa kordhiya suurtagalnimada roobab daran.
Adduunku horay ayuu u kululaayay qiyaastii 1,2 ° C Tan iyo markii ay bilaabatay da'da warshaduhu heerkulkuna wuu sii kici doonaa illaa dawladaha adduunka oo dhammi ay sameeyaan qaddarro lagu sii daayo qiiqa.
Nin oday ah ayaa isku dayay inuu galo magaalo ku dhow in la burburiyo. Wuxuu sheegay in ayeeyadiis ay sidoo kale halkaas joogeen, laakiin uusan helin eheladooda. Xitaa mas'uuliyiinta ayaa sheegay inaysan hubin inta qof ee la la'yahay. Ma jiro wax tilifoon taleefan ah oo laga helayo aagga intiisa badan isgaarsiintuna waa wax aan macquul ahayn. Laakiin tirada dhimashada maanta ayaa la filayaa inay kororto, waqti ka dib, baaxadda masiibadani way sii caddaatay.
Webiga Ahr agtiisa, waxaa ku harsan guryo qalloocan oo daadad daadsan ah, buundooyin jajaban, xero xero, iyo jardiinooyin jilayaal ah. Dad badan oo halkaas ku nool oo xaqiijiyey waxyeelada, waa wax aan macquul aheyn in la qiyaaso nadiifinta iyo dib u bilaabida. Qiyaas ahaan 15.000 oo boolis, askar iyo gurmad deg deg ah ayaa loo daad gureeyay Jarmalka si ay uga caawiyaan baadigoobka iyo samatabbixinta.
Gudaha Biljimka, muuqaal duufaan ah oo daadad wata ayaa muujinaya gawaari lagu jiidayo waddooyinka Verviers. Khatarta xatooyada awgeed, bandow habeenkii ah ayaa la sameeyey.
Liege waa magaalada seddexaad ee ugu weyn Beljamka marka laga yimaado Brussels iyo Antwerp, kuwaasoo amar lagu siiyay inay ka guuraan khamiistii. Saraakiisha maxalliga ah waxay yiraahdaan kuwa aan bixi karin waa inay u guuraan dabaqyada ugu sarreeya dhismayaashooda. Webiga Meuse ee dhex mara magaalada ayaa subaxnimadii Jimcaha la simay, iyadoo qaddar yar oo buux dhaafiyay meelaha qaar.
Isbedelka Cimilada iyo daadadka ka dhaca Jarmalka
Saynisyahannadu waxay cambaareynayaan siyaasiyiinta inay ka gaabiyeen inay ka ilaashadaan muwaadiniintooda dhacdooyinka cimilada daran, sida daadadka waqooyiga Yurub iyo kuleylka kuleylka Mareykanka. Sanado badan, waxay sii saadaaliyeen in isbadalka cimilada ee aadamuhu sameeyo awgood, roobabka xagaaga iyo hirarka kuleylka ay sii xoogeysan doonaan. Hannah Cloke, oo ah borofisar ku takhasustay cilmiga Hydrology ee Jaamacadda Akhriska, ayaa tiri:Dhimashada iyo halaagga ay sababeen daadadka Yurub waa masiibo ay ahayd in laga fogaado”. Saadaaliyayaashu waxay soo saareen digniin horraantii toddobaadkan, laakiin fiiro ku filan lama siin digniinta oo diyaargarowgu kuma filnayn.
Xaqiiqda ah in inta kale ee Waqooyiga Hemishere ay la kulmayaan hirar kuleyl ah oo aan horay loo arag iyo dabka waa inay dadka xusuusiyaan in adduunka sii kululaanaya, cimiladeena ay noqon karto mid qatar badan.
Seynisyahannadu waxay yiraahdaan dowladaha waa inay yareeyaan qiiqa kaarboon laba ogsaydhka ee ka qaybqaata dhacdooyinka ba'an iyo inay u diyaargaroobaan cimilo aad u daran. Si kastaba ha noqotee, gudaha Boqortooyada Midowday, oo ay ku dhufteen daadad culus Isniintii, Guddiga La-talinta Isbedelka Cimilada ee Dowladda ayaa dhawaan u sheegay wasiirrada in u diyaar-garowga cimilada daran ay ka xun tahay shan sano ka hor. Ayuu yidhi dowladdu waxay kaliya buuxisay shan meelood meel ballanqaadyadeedii yareynta qiiqa.
Toddobaadkan uun, dawladda Ingiriisku waxay dadka u sheegtay inaanay u baahnayn jarista duulimaadyada maxaa yeelay tiknoolajiyaddan ayaa xallin doonta dhibaatada qiiqa, iyo khubarada badankood waxay aaminsan yihiin inay tani tahay khamaar.
Roobab culus ayaa wali walaac ka muujinaya guud ahaan Yurub. Dareenka masuuliyiinta ayaa hada ku wajahan Austria iyo qaybo ka mid ah Bavaria ee koonfurta Jarmalka. Warbaahinta Austria ayaa werisay in kooxaha gurmadka degdegga ah ee aagga Salzburg ay ku khasbanaadeen inay dhowr qof ka badbaadiyaan guryahooda, halkaas oo waddo magaalada ah uu ku soo fatahay roob xoog leh.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, dab-demiyeyaasha magaalada Vienna ee caasimadda Austria, ayaa sheegay in xaddiga roobab ee ku dhacay hal saac habeenimadii Sabtida uu dhaafay rikoodhka toddobadii toddobaad ee ka horreeyay. Bavaria, ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay daadka.
Waa in lagu xisaabtamo in dhammaan dhacdooyinka ba'an aan loo nisbeyn karin isbadalkeena cimilada in wali aan loo hayn cadeyn ku filan. Dhacdooyinka cimilada ee aadka u daran ayaa soo jiray malaayiin sano mana la xiriirin isbedelka cimilada. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xiriir ka dhexeeya kororka celceliska heerkulka meeraha iyo kororka astaamaha saadaasha hawada ee ba'an sida daadadkii Jarmalka.
Ma laga fogaan karaa?
Waxaa soo kordhay dhaleeceynta loo jeedinayo ee ku aadan in dowlada Jarmalka aysan adeegsan dhamaan ilaha jira ee ay ku jiraan telefishinka dowlada si ay uga warbixiyaan dhacdooyinki daadka. Afar maalmood ka hor masiibada halista ah ee Jarmalka, nidaamka ayaa la sheegay inuu digniin u diray waddanka iyo Belgium. Si kastaba ha noqotee, Faa'iido ma leh in la diro digniin haddii dadku aysan aqoon sida loogu dhaqmo xaaladaha daadka umana diyaar garoobaan aafadaas oo kale, ma keydinayaan cunto, biyo iyo baahiyaha kale ee aasaasiga ah. Khubaradu waxay sharraxeen, si kastaba xaalku ha ahaadee, way adag tahay in saacado yar gudahood laga raro meel u dhow togga dooxada iyo dooxada sida magaalada Schulder oo kale.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto daadadka Jarmalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Daadadka Jarmalka